Python2 Lesson7- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 7
Python2 Lesson 7
by KhitMinnyo on October 30, 2017 in Python-for-Hackers
Python သင်ခန်းစာများကို အသစ်ထည့်ထားပေးသော menu box ကလေးမှတစ်ဆင့် Python for Hacker ကို ရွေးချယ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း4ထိ သင်ခန်းစာတွေကို မကြည့်ရသေးသူများ အောက်ပါ link ကနေလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Lesson 1 ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson2ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson3ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson4ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson5ကြည့်ရန် link >> Click Here
Lesson6ကြည့်ရန် link >> Click Here
ဒီနေ့တော့ မနေ့က မေးခဲ့တဲ့ lesson လေးကို ပြန်ဆက်ပါမယ်။
မနေ့က problem လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ leafpad မှာ ရေးခဲ့တာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
khitminnyo = ()
if not khitminnyo:
print "\_n There is nothing in khitminnyo."
raw_input("\_n Press enter to continue......")
khitminnyo = ( "Laptop1", "Books" , "1Android" , "1000Ks7" )
print "\_n Khit Minnyo has the items:", khitminnyo
raw_input("\_n Press enter to exit.")
RUN တဲ့အခါ ဘာလို့ error တက်ရသလဲ ဆိုတာကို ခု ပြန်ရှင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Terminal ကနေ python လို့ ရိုက်ခေါ်လိုက်ပါ။
>>> khitminnyo = ()
>>> if not khitminnyo:
... print "\_n There is nothing in khitminnyo."
print ပြီး enter လိုက်တာနဲ့ အထက်ပါအတိုင်း error တွေ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခု ipython ကို ဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
(ipython install ထားသူများသာ)
In : khitminnyo = ()
In : if not khitminnyo:
...: print "\_n There is nothing in khitminnyo."
There is nothing in khitminnyo.
ipython မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ရိုက်တာပါပဲ ဘာလို့ အဖြေထွက်လာလဲ??????
အဲဒါလေးကို ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ else သင်ခဲ့စဉ်တုန်းက သင်ခန်းစာလေးကိုပဲ ပြန်ကိုးကားရပါလိမ့်မယ်။
if ရေးပြီးလို့ print တော့မယ့်အခါ print မရေးခင် tab တစ်ချက် ခုန်ထားပါမယ်။
ပုံစံပါ။ သဘောကတော့ print မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် if ထဲမှာ ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အတွင်းသွင်းပြီးရေးတယ်လို့ မှတ်ထားပေါ့။
terminal က python ဆီမှာ ပြန်ရေးကြည့်ကြစို့
python မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ အဖြေ ရပါပြီ။ ဒါဆို မနေ့က Save ခဲ့တဲ့ ဖိုင်ဆီ ပြန်သွားရအောင်။
R-click နှိပ်ပြီး text editor နဲ့ ဖွင့်ဖွင့် Double click နဲ့ပဲ ဖွင့်ဖွင့်ပါ။
.ပြီးရင် လိုင်3း မှာရှိတဲ့ print ရှေ့မှာ ကာဆာ ချပြီး space bar ၄ချက်နှိပ်ပြီး နောက်ပို့လိုက်ပါ။
သို့မဟုတ် tab key ကို တစ်ချက် ခုန်လိုက်ပါ။ (1 tab =4space)
Save ပြီး ပြန် RUN ကြည့်ပါဦး။
အထက်ပါ ပုံစံမှာပဲ နောက်ထပ် အနည်းငယ် ထပ်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်။ အောက်ဆုံး တစ်တန်း ချန်ပြီး ကြားမှာ ဖြည့်မယ်နော်။
for item in khitminnyo:
ဘာမှ အထွေအထူးတော့ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။
for looping လေးနဲ့ အစဉ်လိုက်လေး ထုတ်ပေးလိုက်တာ တစ်ခုပါပဲ။
Save ပြီး RUN လို့ ရပြီလား။ error တက်သေးလား။ :)
ဒီနေရာမှာတော့ for loop အောက်က print ဆိုတဲ့စာလုံးကို tab တစ်ချက် နောက်ပို့ပြီးမှ ရေးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
error တက်စရာ မရှိတော့ပါဘူး :)
နောက်ထပ် တစ်ကြောင်း ထပ်ဖြည့်ပါဦးမယ်။
print "\_n Khit Minnyo has", len(khitminnyo), "item"
ထပ်ဖြည့်တဲ့ print ကို space နဲ့ ပို့စရာ မလိုတော့ပါဘူးနော် :)
root@kmn:~# cd Desktop
root@kmn:~/Desktop# python lesson6.py
Press enter to continue......
Khit Minnyo has the items: ('Laptop1', 'Books', '1Android', '1000Ks7')
Khit Minnyo has4item
Terminal ကနေ ဖွင့်ပြီး ပြန် RUN ကြည့်တဲ့အခါ ခုလို မြင်ရပါပြီ။ အဆင်ပြေရဲ့လားခင်ဗျ။
အဲသည် ဖိုင်မှာပဲ နောက်ထပ် ထပ်ဖြည့်ပါဦးမယ်။
print "This is ", item
အထက်ပါအတိုင်း ထပ်ဖြည့် စမ်းကြည့်ပါ။ ဘာထူးခြားတာ တွေ့ပါသလဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ raw_input တွေကို ထပ်ထည့်ဖြည့်သုံးပါမယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သွားပါပြီ။
အပေါ်က သင်ခန်းစာကို ပထမပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ရအောင်
အဲသည်အပိုင်းကို ရပြီ နားလည်ပြီဆိုမှ ဒုတိယအပိုင်းကို ဆက်ပြီး ကြည့်ပေးပါဗျ
Python's String Function
Programming Language တွေတိုင်းမှာ String လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ခုတော့ Python ရဲ့ String လေးတွေကို ဆက်ပြီး ပြောပြသွားမှာပါ။
String ဆိုတာ စာသားတန်ဖိုးတွေကို variable လိုပဲ သိုလှောင်ပါတယ်။ ကိန်းတွေကို စာသားတန်ဖိုး ပြောင်းလဲတာတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ functionပေါ့။
အကြမ်းဖျင်းလေး ရှင်းပြရင်း ဥပမာလေး ပေးပါမယ်။
python or ipython နှစ်သက်ရာမှာ ရေးပြီး စမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ စာနည်းတဲ့ python မှာပဲ စမ်းပြထားပါတယ်။ ပြန်ကူးပြတဲ့အခါ ipython က စာပိုဖောင်းပွလို့ပါ။
>>> x = 50
>>> y = "I like the number,"
အထက်ပါ problem အရ x ကို variable သတ်မှတ်စဉ်တုန်းက ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး 50 နဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ y ကိုတော့ စာသားတန်ဖိုးအနေနဲ့ပဲ မှတ်သားခဲ့တာပါ။
Data Type မတူညီတဲ့အတွက် သူတို့ ၂ခုကို ပေါင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒီအခါမှာ string function လိုအပ်လာပါပြီ။
ကြားဖြတ် ပြောစရာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ၂ခုလုံးကို text အနေနဲ့ပဲ မှတ်လိုက်ရင် ရတာပေါ့လို့။
>>> x = "50"
>>> y = "I like this number,"
'I like this number,50'
အထက်ပါအတိုင်း ကြည့်ရင် ရတာပါပဲ။ string ကို ဘာလို့ သုံးဖို့လိုသေးလဲ မေးစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
>>> y = "100"
x တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အခြား ကိန်းတွေပါ ပါလာတဲ့အခါ text ပေါင်းသလို ပေါင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။
သင်ခန်းစာရဲ့ ရှေ့ပိုင်းမှာလည်း ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒါဆိုရင် string လိုအပ်လာပြီပေါ့။ ရှင်းပါတယ်နော်။
အထက်ပါ ဥပမာကိုပဲ ပြန်ဆက်ရအောင်။
>>>a= 50
>>>b= "I like the number, "
>>>a= str (a)
>>>b+ a
'I like the number, 50'
တတိယ လိုင်း မှာကြည့်ရင် မူလaတန်ဖိုးကို ကိန်းဂဏန်းအနေနဲ့ မှတ်ထားရာကနေ text အဖြစ် ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတူညီတဲ့ data type ကနေ တူညီတဲ့ data tpye ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက် ဥပမာ တစ်ခုပေးမယ်။
x က 50, y က 100, အဲ ၂ခု ပေါင်းလဒ်ကို စာနဲ့ ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုပါစို့။
၂ခုပေါင်း ရလဒ်က w လို့ ထားလိုက်။ ကျောင်း သင်ခန်းစာ တွက်နည်းအတိုင်းပဲ ပြောပြနေတာနော်။
>>> y = 100
>>> w = x + y
>>> z = "The result of x + y is, "
>>> w = str (w)
>>> z + w
'The result of x + y is, 150'
ကြည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ ရှင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင် comment ကနေ လာမေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Function တွေ တော်တော်များများ စုံလာပြီနော်။ ဒီတစ်ခါတော့ Integer Function အကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။
Integer Function ဆိုတာ Variable တည်ဆောက်ထားတဲ့ စာသားနဲ့ ကိန်း အရောတွေကနေ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ရွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်လိုလျင် အသုံးပြုရသော function ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်ကလေးကို ကြည့်ရအောင်။ တစ်ကြောင်းစီကို အရင် ရှင်းပြပါမယ်။ ပြီးမှ အားလုံးစုပြီး ပြန်ရေးပေးမယ်။
present = ( 'Book' , 'Laptop' , 'Phone' , 'Shirt' )
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လက်ဆောင် စာရင်းလေးကို variable လုပ်လိုက်ပါတယ်။
for item in present:
လက်ဆောင်မှာ ပါဝင်တဲ့ item တွေကို ကွန်ပျူတာသိအောင် ကြိုပြောထားတဲ့သဘောပေါ့
item တွေကို ထုတ်ချလိုက်ပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း print အတွက် Tab 1ချက် ခြားဖို့ လိုတယ်နော်။
raw_input("\_n Press Enter to know each item...")
ကြားမှာ တစ်ဆင့်ခြားချင်လို့ ထည့်ထားတာ။ မခြားချင်ရင်မထည့်နဲ့ ရတယ်။
print "This item is ", item
This item is ဆိုပြီး တစ်ခုစီကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖော်ပြတာပါ။
ခုနေရာအထိ ဒီနေ့အတွက် lesson 1 မှာ ပြောပြပြီးပြီနော်။ မှတ်မိသေးတယ်မလား။
index = int (raw_input("\_n Type number you want ....."))
integer function စပြီဗျ။ list ထဲကနေ လိုချင်တဲ့ present ကို နံပါတ် ရိုက်ပါလို့ပြောတာ။
သတိထားရမှာက ရေတွက်တဲ့အခါ သုညကနေ စတယ်နော်။
print "\_n The present you want is ", present [index]
ရှေ့ပိုင်းမှာ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖော်ပြချင်တဲ့စာကို print လိုက်တာ။
မတူတာက အထက်မှာ ရွေးခိုင်းလို့ ရွေးတဲ့နံပါတ် ရိုက်လိုက်တဲ့အခါထို အမှတ်စဉ်ပါတဲ့ စာသားကို ထုတ်ပြဖို့ နောက်မှာ index ထပ်ထည့်ထားတာပဲ။
raw_input("\_n Press Enter to exit")
အထက်ပါ စာကြောင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒီလို ရပါမယ်။
index = int (raw_input("\_n Type you want ....."))
Terminal ကနေ RUN ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
root@kmn:~/Desktop# python lesson7a.py
Press Enter to know each item...
This item is Book
This item is Laptop
This item is Phone
This item is Shirt
Type you want .....0 ဒီနေရာမှာ ရွေးတဲ့နံပါတ် ရိုက်ထည့်ရမယ်။
The present you want is Book
lesson ၂ခု ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်နော်။
သတိလေးထားပြီး ဆက်လက် လေ့ကျင့်စေလိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ထွင်တတ်ရင် ထွင်တတ်သလောက် စဉ်းစားတတ်ရင် စဉ်းစားတတ်သလောက် ရေးလို့ရတာတွေ အရမ်း များသွားပါပြီ။
Lesson 8 ကြည့်ရန် Click Here ..........................
ကျွန်တော့်ရဲ့ Website ကလေးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Article လေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ်ဖတ်ရှု လိုပါက ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်သလို Menu box ကနေလည်း ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on October 30, 2017